जो भ्रष्टाचारमा लिप्छ उस्ले कसरी खोज्छ ? आयाेग दुधको साँची विरालो जस्तै हाे ।
बिहिबार, साउन २९, २०७७ प्रकाश अधिकारी
पोखरा । सत्तारुढ नेकपा निकट अनेरास्ववियूले पोखरामा भ्रष्टाचार विरुद्ध सांकेतिक अभियान थालेका छन् ।
पोखरा महानगरमा भएको १३ करोड भ्रष्टाचारको खोजी गर्न विद्यार्थीहरुले नगरपरिषरमा कुचो लगाएर सांकेतिक अभियान सुरु गरेका हुन् ।
पोखरा महानगर भ्रष्टाचारको अखडाभएको भन्दै सुशासन र समृद्धिको लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध कुचो अभियान थालिएको अनेरास्ववियूका नेता क्षितिज सापकोटाले जानकारी दिए ।
महानगरमा १३ करोड भ्रष्टाचार भएको समाचार बाहिरीएसंगै महानगर आफैँले छानविन आयोग बनाएको छ । महानगरले बनाएको आयोग दुधको सांची विरालो भएको सापकोटाको जिकिर छ । सापकोटाले भने जो भ्रष्टाचारमा लिप्छ उस्ले कसरी खोज्छ ? यो दुधको सांची विरालो भने जस्तै भएको छ । उनले महानगरको टिकडम र छलछाम आफुलाई मान्य नभएको बताए । उनले महानगरका कर्मचारीहरुको सम्पती विवरण सर्वाजनिक गरे भ्रष्टाचारी पत्ता लाग्ने उपाय सुझाए ।
अर्का अनेरास्ववियूका नेता राजन पराजुलीले विद्यार्थी आन्दोलन कुनै पाटिको नभई सधैँ प्रतिपक्षको आन्दोलन हुने बताए । पराजुलीले अहिले सरकार विभिन्न काण्डमा फसेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन चर्र्काउनुको विकल्प नभएको बताए ।
पोखरा महानगर कमिटिका अध्यक्ष विशाल गोले तामाङले जुनसुकै शैलीमा भएन पनि आन्दोलन गरेर १३ करोड खोजिने बताए ।
अनेरास्ववियूका सह संयोजक वसन्त भट्टचन लगाएतका विद्यार्थी नेताहरुले हराएको (भ्रष्टाचार) पैसा महानगर भित्रै भएको भन्दै सांकेतिकरुपमा महानगर परिसर, मुल ढोका तथा प्रमुखहरुको कार्यकक्षमा कुचो लगाएर पैसा खोजका थिए ।
बिहिबार, साउन २९, २०७७, १७:१९:००
सोमबार, भदौ १५, २०७७ प्रकाश अधिकारी